November 2019 - Puntland Mirror Believable Media Website
November 30, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa hehiis is-afgarad la saxiixatay shirkada Frontier Service Group si ay u horumariso garoonka Garoowe, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Wasiirka wasaarada duulista hawada […]
November 28, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan ayaa maanta oo Khamiis ah xafiiskiisa ku qaabilay maalgashadayaal ka socda dalka Shiinaha. Maalgashadayaasha u dhashay Shiinaha ayaa ka socda shirkadda U-TON HONG KONG, waxayna […]
November 27, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah moos u dhoofisay dalka Sucuudi Caraabiya markii ugu horeysay muddo sannooyin ah, sida uu sheegay wasiirka beeraha. Siciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka beeraha dowladda federaalka Soomaaliya […]
November 25, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah Suleymaan Maxamed Maxamuud u magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday madaxtooyada. Magacaabistan ayaa ku […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Qeybo kamid ah gobolka Gaardafuu ayaa wajahaya go’doon kadib markii roobab mahiigaan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka da’ayay ay waxyeeleeyeen waddooyinka, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Roobka ayaa sababay in ay go’do […]
November 23, 2019 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah ansixiyay miisaaniyada 2020, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka. 44 xildhibaan oo fadhiday kulanka maanta ayaa dhammaantood ogolaaday, guddoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sidaas sheegay. Miisaaniyada […]
November 23, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa bayaan ay soo saareen Jimcadii ku sheegay in ay fureen baaris ku saabsan dilka looga shaki qabo gabadha Somali-Canadian-ka ahayd taasoo u dhimatay rasaas ku haleeshay […]
November 19, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha wasiirada Puntland ayaa fiidnimadii Isniinta ansixiyay miisaaniyada dowladda ee sanadka 2020. Miisaaniyada 2020 ayaa lagu qiyaasay $346 milyan, taasoo saddex jibaar ka badan tii 2019 oo ahayd $72 milyan. Miisaaniyada ayaa inteeda […]